Bible Mu Nsɛm Yesu Tew Asɔrefi Hɔ - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
YESU bo afuw kɛse wɔ ha, ɛnte saa anaa? Wunim nea enti a ne bo afuw saa? Efisɛ mmarima yi a wɔwɔ Onyankopɔn asɔrefi hɔ wɔ Yerusalem no yɛ adifudepɛfo. Wɔrebɔ mmɔden sɛ wobenya sika pii afi nnipa a wɔaba ha rebɛsom Onyankopɔn no nkyɛn.
Wuhu saa anantwi ne nguan ne mmorɔnoma no? Mmarima no retɔn saa mmoa yi wɔ asɔrefi ha. Wunim nea enti? Efisɛ na Israelfo hia mmoa ne nnomaa na wɔde abɔ Onyankopɔn afɔre.
Onyankopɔn mmara kae sɛ sɛ Israelni yɛ bɔne a, ɛsɛ sɛ ɔbɔ afɔre ma Onyankopɔn. Na na mmere afoforo nso wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ Israelfo bɔ afɔre. Nanso na ɛhe na Israelni benya nnomaa ne mmoa de abɔ Onyankopɔn afɔre?
Na Israelfo no binom wɔ nnomaa ne mmoa. Enti na wobetumi de abɔ afɔre. Nanso na Israelfo no pii nni mmoa anaa nnomaa biara. Na na ebinom nso te baabi a ɛne Yerusalem ntam ware a wontumi mfa wɔn mmoa mma asɔrefi ha. Enti nkurɔfo no baa ha bɛtɔɔ mmoa anaa nnomaa a wohia. Nanso na sika a saa mmarima yi gye nkurɔfo no dɔɔso dodo. Na wɔresisi nkurɔfo no. Afei nso, na ɛnsɛ sɛ wodi gua wɔ Onyankopɔn asɔrefi hɔ pɛɛ.
Eyi na ɛhyɛɛ Yesu abufuw. Enti ɔdan mmarima no apon no butubutuwii, na sika no bɔ petee. Afei nso ɔde mpire pam mmoa no fii asɔrefi hɔ. Ɔka kyerɛɛ mmarima a wɔtɔn mmorɔnoma no sɛ: ‘Momfa wɔn mfi ha, monnyɛ m’agya fi baabi a wɔde anibere pɛ sika.’
Na Yesu akyidifo no binom ka ne ho wɔ asɔrefi ha wɔ Yerusalem. Nea na Yesu reyɛ no yɛɛ wɔn nwonwa. Nanso afei wɔkaee sɛ wɔaka Onyankopɔn Ba no ho asɛm wɔ Bible mu sɛ: ‘Onyankopɔn fi ho dɔ bɛdɛw te sɛ ogya wɔ ne mu.’
Bere a Yesu baa Twam afahyɛ no wɔ Yerusalem ha no, ɔyɛɛ anwonwade pii. Akyiri yi, Yesu fii Yudea na osiim sɛ ɔresan akɔ Galilea. Nanso wɔ kwan so no ɔkɔfaa Samaria mantam mu. Ma yɛnhwɛ nea ɛkɔɔ so wɔ hɔ.
Adɛn nti na wɔretɔn mmoa wɔ asɔrefi hɔ?
Dɛn na ɛhyɛɛ Yesu abufuw?
Sɛnea wutumi hu wɔ mfonini no mu no, dɛn na Yesu yɛe, na dɛn na ɔka kyerɛɛ wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma no sɛ wɔnyɛ?
Bere a Yesu akyidifo no huu nea ɔreyɛ no, dɛn na ɛkaee wɔn?
Bere a Yesu resan akɔ Galilea no ɔkɔfaa ɔmantam bɛn mu?
Kenkan Yohane 2:13
Sɛ yesusuw sɛnea Yesu bo fuw sikasesafo a na wɔwɔ asɔrefie hɔ no ho a, adwene a ɛteɛ bɛn na ɛsɛ sɛ yenya wɔ gua a wodi wɔ Ahenni Asa so no ho? (Yoh. 2:15, 16; 1 Kor. 10:24, 31-33)